ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မတရားတဲ့ အမိန့်အာဏာဟူသမျှ ဗိုလ်ကြီးဟောင်း နေမျိုးဇင်လို သတ္တိရှိရှိ ဖီဆန်ကြ (ရုပ်သံ)
မတရားတဲ့ အမိန့်အာဏာဟူသမျှ ဗိုလ်ကြီးဟောင်း နေမျိုးဇင်လို သတ္တိရှိရှိ ဖီဆန်ကြ (ရုပ်သံ)
ကိုနေမျိုးဇင်ကို လေးစားပါသည်။ အဲဒီ နအဖခွေး ၂ ပွင့်နဲ့ကောင်ကိုတော့ ချီးကားတိုက်ပြီး မြန်မြန် သေပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်။
Bravo !!!! ကိုနေမျိုးဇင် ...
ပြည်သူတွေအပေါ် မိုက်ရိုင်းစွာ အနိုင်ကျင့် စော်ကားနေတဲ့
အဲဒီ ရဲ အယုတ်တမာလို သခင်အားရကျွန်ပါးဝနေတဲ့ ကောင်တွေကို ကိုနေမျိုးဇင်လို
ရဲရဲဝံ၀ံ ပြန်လည် ဖီဆန်ပြစ်ရမယ်။ ဒီကောင်တွေက ဥပဒေ
နားလည်တဲ့ သူတွေဆို အရမ်းမလုပ်ရဲဘူး ကြောက်တယ်
ဥပဒေနားမလည်တဲ့ လူတွေဆိုရင် လုပ်ပြပါလိမ့်မယ်
အခု ကိုနေမျိုးဇင် ပြန်ပြောသလိုသာ ပြန်ပြောကြည့်ပါလား
ရဲစခန်းထဲ ခေါ်သွားပြီး သူများသားသမီးကို ပါးရိုက်နား
ကိုနေမျိုးဇင် မိုက်တယ်ဗျာ အဲလိုသာကောင်းကောင်း ပြန်ဖြဲပြစ် ဆက်လုပ်ပါ ကိုနေမျိုးဇင် အားပေးပါတယ်။
Lun Swe and Air-gun group, please Learn from him how he helps Myanmar people and supports pro-democracy leaders.
We like UNCLE MYO ZIN...u see he knows how cruel and heartless they are..now the dress changed goverment know alot of their people know and don't like their action...they will never mention such as uncle U MYO ZIN.may be they want to kill or arrest him forever in jail....tq alot alot...dr.Lun swe .bec of ur heart and hand we can see such as great people who want TO BE REAL HUMAN BEING...not like color change goverment....bad leaders...
Dear Ko Nay Myo Zin....
We are strongly supported your every activity of strike for people's right in everywhere .
Be congratulation and great appreciated .
ဥပဒေ ဆိုတာကို အာဏာရှင်တွေ လက်ထက် က လုပ်ချင်သလို လုပ်သွားခဲ့တာ ကိုနေမိူးဇင်လို လူမိူး ကို တောက်လျှောက် အမိူးမိူး အကြောင်းပြဖမ်းဆီးနေတာ ဒီအဖြစ်အပျက် က လည်း ထင်ရှားပါတယ် လူတွေကို အမှန်တရား မပြောရဲအောင် လုပ်တဲ့ ခေတ်ကျဆုံးသွားပြီ
You have done bravely for our country's peoples.You are the true leader of democracy.
We need you for our future country likeakeader.
ko toe>>>you are stupid.Can you do like Ko nay Myo Zin? Ask your self.Don't think about negative if yourahuman.
Police guy never read the law carefully. Now get shamefully in front of people. The person above of him who ask go and catch to ko nay myo zin. If i marelationship of police guy, really go to suicide. Appreciated courage of ko nay myo zin.
saw kyawaung said...
တကယ်တော့ ရဲတွေက တစာခံတွေပါဘဲ
နေမျိုးဇင် အနေနဲလဲ လူကြီးလူကောင်း တယောက်လို ပြောဆိုသင့်တယ်
tanglang lang said...
legal gangstar are myanmar police
လဒ်စားရင်လဲစားတယ်လို့ ဝန်ခံလိုက်ပေါ့ ရဲတွေရယ် နင်တို့ ပြောတော့ ဒီမိုကရေစီပြောင်းနေပြီဆို
မှတ်သားစရာ တုန့်ပြန်မှုလေး တစ်ခု
``အမိန့်အရ ဆိုရင် ကျွန်တော် မေးမယ်၊ "ကိုယ့်အမေ ကိုယ် မုဒိမ်းကျင့်" ဆို ကျင့်မလား`` ဟု တပ်ပြုတ် နေမျိုးဇင်က စတင် မိုက်ရိုင်းသဖြင့် မုံရွာခရိုင် တန့်ဆည်ရဲစခန်း တာဝန်ကျသူ ဒုရဲအုပ် မျိုးမင်းနိုင်က နေမျိုးဇင်ကို တုန့်ပြန်ကာ ပြန်ပြောခဲ့သည်ကို တပ်ပြုတ် နေမျိုးဇင်က ဟောက်စားလုပ်တော့သည်။
``ဟေ့ကောင်.. မင်း ငါ့ကို မင်းနဲ့ ငါနဲ့ မပြောနဲ့.. ဗိုလ်ကြီးလို့ခေါ်.. ငါ ဗိုလ်ကြီးဟောင်းကွ.. ထွက်လာတာ မကြာသေးဘူး`` ဟု တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ အမည်ခံကာ လုပ်စားနေသော တပ်ပြုတ် နေမျိုးဇင် က ဒေါနှင့် မာန်နှင့် ပြောလိုက်စဉ်တွင်...
မုံရွာခရိုင် တန့်ဆည်ရဲစခန်း တာဝန်ကျသူ ဒုရဲအုပ် မျိုးမင်းနိုင် မှ လေသံအေးအေးလေးဖြင့် ``ဗိုလ်ကြီးဆို... ဖင်ခံလိုက်ပေါ့ကွာ`` တဲ့..
ဟုတ်ပါ့ကွာ ဗိုလ်ကြီးဟောင်းဆိုရင်လဲ သူနဲ့ အဆင့်တူ
စစ်တပ်က ဗိုလ်တွေကို အဲဒီလေသံနဲ့ သွားပြီး ဆက်ဆံပါလား အဲလိုမျိုးစစ်တပ်က နွားတွေကို မင်းနဲငါ
နဲ့သုံးပြီး သွားဟောက်စားလုပ်ပါလာ။ ဘာလို့ သွားမလုပ်တာလဲ ကြောက်လို့လား ဒါမှမဟုတ် အရင်က
ကို့လုပ်ဖောက်ကိုင်ဘက်တွေ ဆိုပြီး သံယောဇဉ်ရှိလို့လား
နေမျိုးဇင်ရ။အခု ခင်ဗျား ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်နေတဲ့
လူတွေက ဘာအဆင့်မှ မရှိ ဘာဆိုဘာကောင်မှ မဟုတ်တဲ့ ရဲအပေအတေ တွေကိုပဲတွေ့နေရတယ်။
ပြည်သူ့အကျိုးပြုလုပ်နေတယ်လဲ ပြောသေး အခုထက်ထိ ဗိုလ်ကြီးဟောင်းဆိုတဲ့ ပကာသန က မစွန့်နိုင်သေးဘူး။ စကားပြောပုံဆိုပုံကလဲ ဟောက်စား
လုံးဝမပြောက်သေးဘူး ။ ကြည့်ကောင်းအောင်လဲ လုပ်
ဒီမိုကရေစီလိုချင်ရင်ပြည်သူတွေကစိတ်ဓါတ်တွေပြောင်းလဲမှရမယ်တဲ့ ကဲဘယ်လိုလဲ ပြောင်းလဲဖို့အသင့်ဖြစ်ပြီလား
ကူညီပါရစေဆိုပြီး ဒုက္ခပေးနေတဲ့ရဲတွေကို အရင်ဖြုတ်ပစ်ပါ
ကိုနေမျိုးဇင်ရဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ အကျင့်စရိုက်ကို အပြည့်အ၀ လေးစားတယ်။ ထောက်ခံတယ်။ စစ်သားထဲမှာ ဒီလိုစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့လူ ရှာမှရှားတယ်။ ငါ့မှာ လက်ထိပ်ခပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုပြီး လက်ယားနေတဲ့ သောက်သုံးမကျတဲ့ ရဲအုပ်လိုလူစားမျိုး မရှိသင့်တော့ဘူး။ ဟောက်စားလုပ်တယ်ပြောပြော.. အပြောအဆို လူကြီးမဆန်ဘူးပြောပြော.. ဒီလို ပြည်သူတွေအပေါ် အနိုင်ကျင့်ဆော်ကား၊ အကျင့်ယုတ်နေတဲ့ ရဲတွေအပေါ် ဒီလိုပဲ ဆက်ဆံမှ တော်ကာကျတယ်။ တိုင်းပြည်က လမ်းကြောင်းအမှန်ကို ပြောင်းလဲနေပေမယ့် ဒီလို ရဲမျိုးတွေက အရင်လိုပဲ ကိုယ်လိုရာ ဆွဲလို့ရတဲ့ဥပဒေတွေကို လက်ကိုင်ဒုတ်လုပ်ပြီး ပြည်သူအပေါ် ညစ်ပတ်၊ ကောက်ကျစ် မိုက်ရိုင်းဖိနှိပ်ချင်နေတဲ့ သောက်ကျင့်က တပြားသားမှ မလျှော့သေးဘူး။ ဗိုလ်ကြီးဟောင်းနေမျိုးဇင်လိုလူတွေ အရပ်ဖက် လူအဖွဲ့အစည်းမှာ အားကောင်းမောင်းသံ ဖြစ်လာမှ အသံတွေ ပိုကျယ်လာမယ်။ ဒါမှ လွှတ်တော်နဲ့ အစိုးရက ပိုကြားရမယ်။
လက်ပံတောင်းတောင်မှာ ပြောတုန်းက ကွန်မန့်ပေးထားတဲ့ တစ်ယောက်ပြောသလို ""ငါ့ကိုဗိုလ်ကြီးလို့ခေါ်""..ဆိုတဲ့ စကားလုံး မပါ..ပါဘူး။ နေမျိုးဇင်ကို သောက်မြင်ကပ်ရင်လည်းကပ်ပေါ့.. ဒါပေမယ့် သူမပြောတဲ့စကားလုံးကို ချဲ့ကားပြီး စွပ်စွဲတာမျိုး မဖြစ်သင့်ဘူး။
ကိုနေမျိုးဇင်ကိုဖမ်းတဲ့ ရဲအုပ်က ကြည့်ရတာ ရခိုင်လူမျိုး
ထင်တယ်။ တော်တော် အသုံးမကျတဲ့ ရဲ ဘူးသီးတောင် မောင်တော ကိုပို့လိုက်ကွာ။ ဒါ ကိုသိန်းကိန် အမိန့်ပဲ။
Everybody need to respect each other. I really upset watching this video file as I did admire Ko Nay Myo Zin last time that he stands for public and now he does action look like the person who thinks he ever right and never respect other. So upset.
ဟန်ဆောင် လုပ်စားကောင် က သရုပ်ဆောင်ပြ နလပိန်းတုံးတွေက အထင်ကြီးကြ
Hi nyi lay.im.too much respect on you.i stand for you and support on you ASAP. KO Freddie.
im respect you.
စောင့်ကြည့်ရတာပေါ့ကွာ နေမျိုးဇင်ကြောင့်နိုင် ငံတော်ကြီးတိုးတက်ပြောင်း
လဲသွားမလားနောက်ပြန်လှည့်သွားမလားဆိုတာကို။ရညရွယ်ချက် ရှိရှိ လုပ်နေတယ်လို့ ထင် တယ်
ဟား ဟား ဟား ... You တို့ နှစ်ယောက်တော်ကြပါ၏
IQ EQ CQ ပြည့်ကြပါ၏ အတွေးအခေါ် ကို သာဓု ခေါ်ပါ၏
နေမျိုးဇဉ်တော့လျှာ ထွက်မှာမျင်ရောင် မိတယ်
နေမျိုးဇင်ဟာ ပြည်သူဘက်တော်သား ပြည်သူအကျိုးကို ကာကွယ်ပေးနေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ ကို အဖိနှိပ်ခံ လယ်သမားတွေ၊ ရွာသားတွေအားလုံး အားကိုးကြတယ်။ ချစ်ကြပါတယ်။ သူ့ ကို တိုက်ခိုက် လာဆဲနေသူတွေဟာ ဘယ်အုပ်စုက ကောင်တွေလဲ ဆိုတာ မေးစရာမလိုအောင်ရှင်းပါတယ်။
Ko nay myo zin.U Thant strike time im 2nd year at Mandalay hall RASU.my whole life (60 years)times, looking and searchingawords,but i didn't found.Today i fineawords which was coming from you's mouth.thanks and very respect to you.Ko Freddie.
ပြည်သူကဘယ်ဘက်မှာလည်းဆိုတာသိရမယ်လေ သနားစရာကောင်းတဲ့တောင်သူလယ်သမားတွေဘက်ကိုရပ် တည်တာပါ လေးစားစရာပါ အဲဒီလောက်ပုတ်ခတ်ဝေဖန်နေ တာမင်းတို့ကရဲဝန်ထမ်းဆန်စားနေလို့လားခွေးမသားတွေ စစ်အစိုးရနဲ့ပဲတန်တဲ့နွားတွေ မင်းတို့ကောမတရားတာကို မတရားဘူးလို့ပြောရဲလို့လား အသားထဲကလောက်တွေ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာသိအောင်ကြိုးစားပါ မင်းတို့ကိုစေတနာနဲ့ဆဲနေတာ လက်ခံပါ စောက်သုံးမကျတဲ့ ခွေးတွေ
ရဲတွေက လူမှမဟုတ်ပဲလေ လူလိုဆက်ဆံဖို့ မကောင်းဘူး ခွေးကို ခွေးလိုဆက်ဆံတာ သဘာ
ဟေ့ကောင် ဘယ်တိုင်းရင်းသားဖြစ်ဖြစ် မင်းတို့ 
အေဒီရဲသားက တောင်ငူသား ဗမာအစစ်ပဲ
တို့ တိုင်းရင်းသားတွေကို ချောက်မတွန်းနဲ့ 
မင်းတို့ လူမျိုးအောက်တန်းကျတာ တိုင်းရင်း
ဦးခင်ညွှန်.ဒေါ်စုတို့အဖမ်းခံ၇တဲ့အချိန်ဒီလိုပုံစံမျိုးမဟုတ်ပါဘူး..သူ၇ဲကောင်းလုပ်ပြချင်စိတ်များနေတယ်..ဒီလိုလူမျိုးတိုင်းပြည်ခေါ်င်းဆောင်ဖြစ်၇င်ဦးသန်းရွှေထက်၂ဆဆိုးပါလိမ့်မယ်..ထောက်ခံသူများသတိထားပါ။Lack of knowledge person
BOO0 ပြောပေါက်ဆိုပေါက်ကြည့်ရတာ စစ်သားစိတ်မပြောက်သေးသလိုပဲ၊ တပ်ထဲပြန်ဝင်ပါဦးလား ရှေ့တန်းမလိုက်ရအောင် ဗဟိုကင်းမှာထားပေးမယ် ကြည့်ရတာ BJ လဲ ကောင်းမယ့်ပုံဆိုတော့ စစ်ခရာမှုတ်ပေါ့
saw kt oo ပြော်တာ သဘာဝကြပါတယ်... ထောက်ခံပါတယ်....